China Base Mount fekitori uye vanotengesa | Qian Iye
Ichi chigadzirwa chigadziko chepamusoro
Iyi igomo rekuzasi iro rinoshandiswa zvakanyanya mukicheni, kahawa uye zvichingodaro.
Icho chikamu chakagadzirwa kubva ku6061-T6 aluminium alloy uye ine yakanaka bead blast ipapo dema anodize kupera.
Muchidimbu, zvinogona kuoneka senge mhando yeyakareruka kupisa nhovo yekuisa hari inopisa inobata mahafi akabikwa.
Vazhinji vanogaya dzimba nekutengesa vanotambura nezvikanganiso zviviri. Chekutanga ndiko kunetsekana kwekuchenesa muchina uye wechipiri huwandu hwekofi yepasi yakachengetwa muchikamu mushure mekushandisa. Idzi nyaya mbiri dzinoenda pamwe chete. Sezvinoratidzwa nemufananidzo, kofi yepasi inogona kuzadza nook imwe neimwe uye granny muchigayo. Kana muchina wacho uchinetsa kushandira izvi nekukurumidza inova dambudziko.
Vagadziri vanowanzo tarisa kumatambudziko aya vachimanikidza mushandisi kuti atore marimi anonetsa ekuchenesa kana kushandira kumabasa ekubhadharisa kushomeka kwekugadzira. Isu taida kugadzirisa kuchengetwa uye kurerukirwa kwekuchenesa mune yekugadzira grinders kubva pakutanga chaipo. Imwe yemhinduro dzedu yaive yekuisa yakananga nzira yekubuda yenzvimbo kubva kuburrs.
Izvo zvinopinda zvinofanirwa kubuda
Dhizainzi dhizaini yekugaya inofambisa kofi inofamba nemuchina munzira yakaderera yakasiya giravhiti iite rese basa. Bhinzi dzinoiswa mumupendero wepamusoro uri pamusoro chaipo peya burrs. Chimiro chedota retirimendi yekumusoro chakabatanidzwa nehanyanisi senge chimiro cheiyo shaft huru, inoderedza mukana webhinzi rinobuda kunze kweguyo. Pane imwe nguva kuburikidza ne burrs, yakananga kupfura pasi uye kunze kwemuchina.
Iko hakuna machute, dosing michina, kana nooks uye crannies yezvikonzero zvekubatwa.